Cunsuriyada iyo Hay’ada Socdaalka Sweden | Somaliska
Hay'ada Socdaalka Sweden (Migrationsverket) ayaa baaritaanku sameynaysa mid ka mid ah shaqaalaheeda ka dib markii uu ku daabacay facebook hadalo uu wax uga sheegayo dadka ku nool Rinkeby. fikrada ninkaan ayaa waxaan jeclaysan maamulka Hay'ada Socdaalka. "Waxaan qabanaa kiisas la xiriira nolosha dadka, in koox dadka ka mid ah si gaara loo arko wax la sameyn karo mahan, aragtida ninkaas mid aan ku shaqeyno ma ahan mana ka soconeyso in aad ka shaqeyso Hay'ada Socdaalka fikrad cunsurinimana aad leedahay" ayuu yiri Jonas Lindgren oo wakiilka xaga xiriirka u qaabilsan Hay'ada Socdaalka. Ninkaan cunsuriyada lagu eedeynayo ayaa sheegay in uu ka hadlaayay rabshadihii ka dhacay Rinkeby bishii Juun asagoo facebook ku qoray "Dadkaas ku nool Rinkeby waa in lagu celiyaa wadamadii ay ka soo jeedeen..." Balse ninkaan ayaa ku doodaya in aragtidiisu aysan cunsuriyad ahayn uuna ka hadlaayay dhalinyaradii rabashada sameysay oo kaliya. Jonas Lindgren ayaa yiri "Waa masuuliyad qofka saaran in uu kala saaro fikradiisa shaqsiyadeed iyo shaqada, qofkaan waa mid fikrad adag ka heysta koox bulshada ka mida sidaa darteedna way adagtahay in uu si saxa u baaro kiisaska loo dhiibo". Hay'ada Socdaalka ayaa hada baaritaan ku sameynaysa cunsuriyada iyo shaqaalaha Hay'ada Socdaalka. "Su'aal aan markasta is waydiinaa waxay tahay, adigoo cunsuri ah maka shaqeyn kartaa Hay'ada Socdaalka? Jawaabtu waa maya" ayuu yiri Jonas Lindgren Sveriges Radio.
Hay’ada Socdaalka Sweden (Migrationsverket) ayaa baaritaanku sameynaysa mid ka mid ah shaqaalaheeda ka dib markii uu ku daabacay facebook hadalo uu wax uga sheegayo dadka ku nool Rinkeby.
fikrada ninkaan ayaa waxaan jeclaysan maamulka Hay’ada Socdaalka.
“Waxaan qabanaa kiisas la xiriira nolosha dadka, in koox dadka ka mid ah si gaara loo arko wax la sameyn karo mahan, aragtida ninkaas mid aan ku shaqeyno ma ahan mana ka soconeyso in aad ka shaqeyso Hay’ada Socdaalka fikrad cunsurinimana aad leedahay” ayuu yiri Jonas Lindgren oo wakiilka xaga xiriirka u qaabilsan Hay’ada Socdaalka.
Ninkaan cunsuriyada lagu eedeynayo ayaa sheegay in uu ka hadlaayay rabshadihii ka dhacay Rinkeby bishii Juun asagoo facebook ku qoray “Dadkaas ku nool Rinkeby waa in lagu celiyaa wadamadii ay ka soo jeedeen…”
Balse ninkaan ayaa ku doodaya in aragtidiisu aysan cunsuriyad ahayn uuna ka hadlaayay dhalinyaradii rabashada sameysay oo kaliya.
Jonas Lindgren ayaa yiri “Waa masuuliyad qofka saaran in uu kala saaro fikradiisa shaqsiyadeed iyo shaqada, qofkaan waa mid fikrad adag ka heysta koox bulshada ka mida sidaa darteedna way adagtahay in uu si saxa u baaro kiisaska loo dhiibo”.
Hay’ada Socdaalka ayaa hada baaritaan ku sameynaysa cunsuriyada iyo shaqaalaha Hay’ada Socdaalka.
“Su’aal aan markasta is waydiinaa waxay tahay, adigoo cunsuri ah maka shaqeyn kartaa Hay’ada Socdaalka? Jawaabtu waa maya” ayuu yiri Jonas Lindgren
Doorashada Sweden & Danaha Soomaalida: Xisbiyada Socialdemokraterna, Moderaterna iyo Miljöpartiet
Bilada Nobelka oo lagu dhawaaqay iyo mid ka mid ah dadkii ku guuleystay oo dhintay
Malmö: Caruurta aan sharciga la hayn oo cayr la siinayo
Shakti fareey says:
July 3, 2010 at 06:23
Sidee uga shaqeynay nin ceynkan oo kale ah Waxan si aad u soo dhaweynaya go,aan ay ka qaday hey,ada socdaal sweden ninkan cunsiriga ah waana hor mar looga qaday dhinaca sinaanta